Added: 2012 May 22
काठमाडौं/ आफ्नो राष्ट्रवादी गीत टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गर्ने आ“ट नगरेपछि गायक जे. पापीले यु-ट्युबको सहारा लिएका छन् । उनकै शब्द, संगीत र स्वरको यो देशको काट्टो खानेहरू बोलको गीतको भिडियोलाई सरकारी त भएनै, निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानलले समेत प्रसारण गर्ने चेष्टा गरेका छैनन् । त्यसकारण गायक पापीले आफ्नो सो गीतको भिडियो यु-ट्युबमार्फ विश्वव्यापी बनाएका छन् ।
'मैले मेरो यो गीतको भिडियो थुप्रै टिभी च्यानललाई दिए“ । तर, कही“ पनि बजेन,' गायक पापीले भने, 'टिभी च्यानलले बजाउन नसकेपछि मैले चार दिनअघि मात्रै यु-ट्युबमा हाले“ । अहिलेसम्म दर्ुइ हजारले हेरिसकेका छन् ।' गीतमा देशको वर्तमान भद्रगोल राजनीति, नेताको गैरजिम्मेवारीपन र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, नेपाली जनताको दर्ुदशा तथा समसामयिकतामा प्रस्तुत गरिएको छ । सञ्जय पाण्डेको निर्देशनमा बनेको यो देशको काट्टो खानेहरू भिडियोमा मुलुकका विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीी नेताको फाइल भिजुअल समावेश गरिएको छ । यही कारणले आफ्नो गीत टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण गर्न आनाकानी गरेको उनी बताउ“छन् ।
सा“ढे तीन दशकअघिदेखि देश र जनताका लागि सांगीतिक अनुसन्धानमा लागेका उनका माछी मार्न जाऊ“ न दाजै कालापानीमा, बाह्र बजे तोप चल्थ्यो, एउटा इतिहास बोल्थ्यो, सुत् सुत् निदाए काठमाडौं सहर, सिन्धुलीमाडी गढी दरबारलगायतका जागरणमूलक गीतहरू चर्चित छन् । यो देशको काट्टो खानेहरू पापीको तेस्रो एल्बम हो । उनी हाल राष्ट्रियता र जनजागरणले भरिएको चौथो एल्बमको तयारीमा लागेका छन् । उनले टेलिभिजनले प्रसारण नगरेमा आफ्नो गीतको भिडियो इन्टरनेटमा काट्टो खानेहरू डट जे. पापी र्सच गरी हर्ेन आमनेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् ।